Kunamata Poindi Kurwisa Hondo YeBarika Repamba | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kurwisa Hondo YeBarika Barika
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinorwa neiyo barika imba. Mugumo wakawanda wakaparadzwa nekuda kwehondo yedzimba dzebarika. Joseph akatambura zvakanyanya barika. Zano raMwari pahupenyu hwake nderekuti ave murume mukuru uye Mwari vakamuratidza muhope dzake. Joseph aikurumidza kurondedzera hope dzake kumhuri yake uye ndiko kwakave kutanga kwedambudziko rake.
Joseph nhanho vakoma vakamusunga vakamurwisa uye akafunga kutora hupenyu hwake hupenyu hwake husati hwazadzikiswa. Saizvozvo muhupenyu hwedu, kune vanhu mumba medu barika vasingade kutiona tichikwanisa muhupenyu uye ivo vanozoita chero chinhu kuona kuti zviroto zvedu zvinoramba zviri zviroto uye hazvizombove zvechokwadi. Ndosaka zvakakosha kuti unamate uchipesana nedambudziko remba barika. Saka mbiri zhinji yakaparadzwa uye angave mwana akaurayiwa kubva muhondo iyi.
Uyu mutungamiri wekunamatira uchapesana nemasimba ese kubva kumba kwedu barika ari kusimudzira kurwa nesu nekuda kwechiratidzo chedu, kubwinya uye ramangwana. Ndinoraira nesimba redenga, simba rese riri kusimudzira kurwa newe, munhu akadaro ngaafe nhasi muzita raJesu. Vanhu havadi kuti vanhu vabudirire muhupenyu kupfuura zvavanoita ndosaka vachizoita chero chinhu kuti vave nechokwadi chekuti hope hadziuye pachokwadi. Ndinoraira nemvumo yedenga, simba rega risingade kuti uzadzise zvakatemwa, masimba akadaro ngaawire kurufu nhasi muzita raJesu.
Kana iwe uchibva kumhuri yebarika, iwe unofanirwa kunyengetera zvakanaka. Kune masimba akawanda kwazvo anoshanda achipesana nevanhu vanobva kumisha yebarika. Ndinonamata kuti ruoko rwamwari rwaMwari rukuburitse kubva muhondo dzese dzemadhimoni idzo dziri kurwisana nehupenyu hwako muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nerimwe zuva rakanaka ramakaita, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nehondo yese ingangoda kuzomukira kwandiri kubva kumhuri yangu barika, ndinoparadza hondo dzakadai muzita raJesu.
Ishe Mwari, rugwaro runoti Kristu akaitwa chituko nekuda kwedu nekuti akatukwa ndiye akasungirirwa pamuti. Ndinobvisa zvimiro zvese zvekutuka zvataurwa pamusoro pangu muzita raJesu.
Ishe, chisungo chese chakaipa icho mhuri yangu barika yakanditangira icho chiri kukanganisa hupenyu hwangu, Ishe bvisai zvibvumirano zvakadaro munaJesu.
Ndinoraira nesimba rematenga kuti magumo angu arege kuparadzwa muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinouya kuzorwa nemuvengi wese akasimba mumba mangu barika ndichirwira kuparadza ramangwana rangu, regai moto weMweya Mutsvene uvapedze muzita raJesu.
Ishe, muvengi wese wenhare wandakaisirwa kuti aparadze magumo angu, anowira kurufu muzita raJesu. Ishe simukai vavengi venyu vapararire, avo vanotsvaga kupunzika kwangu nerufu ngavawire murufu nezita raJesu.
Ndinoraira nesimba rematenga, museve wese wakapfurwa kwandiri kubva kuvavengi vebarika mumba mababa vangu, vafe nhasi muzita raJesu.
Mwari wekutsiva, simuka nhasi utore kutsiva pamusoro pevavengi vese vemba izvo zvinodzikira nekufambira mberi muhupenyu. Ndinonamata kuti coventi yega yevavengi mumhuri yangu iparadzwe nemoto muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti pamusoro pehupenyu hwangu, kuraira kwenyu chete kunomira muzita raJesu. Ini ndinoparadza zvirongwa zvese zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu. Zvirongwa zvavo zvese zvehupenyu hwangu ngazvipararire muzita raJesu.
Chinyorwa chinoti nekuti ini ndinotakura mucherechedzo waKristu, ngakurege kuva nemunhu anondinetsa. Ndinonamata kuti ndirege kunetseka muzita raJesu. Chizoro chekubata kwete yangu yakazodzwa uye usaitira vaporofita vangu hapana chakaipa. Ndinonamata kuti hapana chakaipa chingandiwira muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti muchandishongedza korona nekudzivirirwa Bhaibheri rinoti meso aIshe anogara ari pane vakarurama uye nzeve dzake dzinoteerera minamato yavo. Ndinonamata kuti mundichengetedze kubva kune zvakaipa zvese nemuzita raJesu.
Mhuka dzese dzedhimoni idzo muvengi ari kushandisa kundinonotsa, ndinonamata kuti vawire kurufu muzita raJesu. Mweya wese wehozhwa muhupenyu hwangu wakanzurwa muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nedhimoni rega rekutadza iro rakapihwa kunetsa hupenyu hwangu nemuvengi. Ini ndinoraira kubva nhasi handichamisiki muzita raJesu.
Ishe ndinouya kuzopesana nesimba revapambi kuparadza pamusoro pehupenyu hwangu. Ishe Jesu, ndinonamata kuti moto waMwari Samasimba uuye pamusoro pavo nemuzita raJesu.
Baba Tenzi, wese anouraya kukudzwa mumba mababa vangu, anowira kurufu nezita raJesu. Wese anouraya kukudzwa mumba mamai vangu anowira kurufu nezita raJesu.
Tenzi, ndinouya kuzopesana nesimba revanoona kubwinya kwemunhu nekuriparadza, Ishe regai munhu akadaro aparadzwe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Ishe Jesu, zvimhingamupinyi zvese zvandanga ndichisangana nazvo zvichikonzerwa nebarika, ndinozvikanzura nhasi muzita raJesu.
Wese murume kana mukadzi akatsamwa mumhuri yangu akatsamwa nekuda kwekubwinya kwangu, afe nhasi muzita raJesu. Ini ndinozivisa kufa kwemurume wese asingadi kuti ndikure muhupenyu, kufa nhasi muzita raJesu.
Ndinoraira nhasi kuti handigoni kumisidzana nemasimba ese ebarika muhupenyu hwangu. Munzira dzese dzavanga vachiedza kundimisa, ndinogashira kumhanyisa pamweya muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kurwisa Kuneta Kwangu
inoteveraKunamata Points YeRusununguko
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Uyo anofarira kufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.
10 ndima bhaibheri pamusoro kupindwa muropa
Zuva Nezuva Rinoshanda Munyengetero Kuti Ubudirire Kubasa
30 Minamato yeMinamato Yekukunda Nemavhesi eBhaibheri
Kununurwa Minamato Kubva kuSatani Kubata